नयाँ दिल्ली, २७ फागुन। भारतले सन् २०२२ सम्ममा १७५ गिगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले ‘सौर्य अध्ययन बत्ती योजना’ मार्फत् ७० लाख विद्यार्थीलाई उज्यालोको पहुँच दिनेछ । ‘अटल ज्योति योजना’को उद्देश्य भारतीय सडकमा वत्तीको प्रवन्ध गर्नु भएको र यसलाई सौर्य उर्जाको सहायतामा सफल पार्ने उहाँको भनाए थियो ।
प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नुभयो, यदि सौर्य शक्तिलाई प्रविधिका अन्य क्षेत्रमा पनि जोड्न सकियो भने यसबाट मुलुकको विद्युतको मागलाई थप परिणाममुखी बनाउन सकिनेछ । भारत सरकारले २८ अर्ब एलइडी वल्व बाँडेर विगत तीन बर्षमा दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको धनराशी जोगाएको छ भने ४ गिगावाट विद्युत खपतलाई पनि बचाएको छ, प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नुभयो । यसबाहेक यस योजनाले तीन करोड टन कार्बनडाई अक्साइड उत्सर्जन हुनबाट जोगाएको छ ।
प्रकाशित : सोमबार, फागुन २८, २०७४१०:४८
जनताको घरदैलोमै सरकार पुग्यो, अब विकासमा लाग्नुस्ः पूर्वप्रम चन्द
राष्ट्रियसभामा शोक प्रस्ताव पारित!
भारतमा सडक दुर्घटना परी पाँचको मृत्यु
पैसाबाट पैसा बनाउने भन्दै दिउँसै ठगी ! दुई ‘जादुगर ठग’ को तिकडम देखेर प्रहरी पनि छक्क !